» गायक बन्ने सपना बोकेका छोरालाइ जबर्जस्ती डाक्टर पढाउदा भयो यस्तो दुर्घटना ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित) गायक बन्ने सपना बोकेका छोरालाइ जबर्जस्ती डाक्टर पढाउदा भयो यस्तो दुर्घटना ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
गायक बन्ने सपना बोकेका छोरालाइ जबर्जस्ती डाक्टर पढाउदा भयो यस्तो दुर्घटना ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
चितवनको एउटा सम्पन्न परिवार थियो । बुवा चिकित्सक पेशामा थिए । ति परिवारका अभिभावकको छोराछोरीले पनि राम्रै ब्यवसाय गरुन भन्ने चाहना थियो । निर्मल भट्टराई चिकित्कस बन्न चाहन्नथे ।”
“उनलाई गायक बन्ने रहर थियो । तर बुवा आमाले गायक भनेको कमाउने पेशा होइन कमाउनका लागि डाक्टर हुनुपर्छ भनेर उनको इच्छा वि परित एमविविएस भर्ना गरिदिए । उनी एमबिबिएसको दोस्रो स्तरमा पढ्दै थिए । तर उनी एकाएक हराए ।”
“हरेक वर्षको तिहारमा निर्मलको ठाउँ दिदी बहिनीले खाली राख्ने गरेका छन् । आफ्नो अंकलको छोरा सहित उनीहरुले तीन दाजुभाईलाई टिका लगाउने गरेका थिए । अहिले निर्मल हराएपछि उनीहरुले त्यो ठाउँ खाली राखेका छन् । भरतपुर स्थित सरकारी अस्पतालमा कार्यरत निर्मलका बुवा कमल भट्टराई ल्याबमा काम गर्छन । उनले अहिले ३४ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा काम गरे । आमा निरु भट्टराईको आखा छोरा हराए देखि ओभाएका छैनन् ।”
“उनीहरुले आफ्नो छोरालाई घर फर्कन आउ भन्दै आग्रह गरेका छन् । उनीहरुका छोरा निर्मल भरतपुरकै (नारायणपुर) सिएमसी चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा पढ्दै गरेका उनका छोरा २०७० सालमा हराएका हुन् । भरतपुर ९ मा पुगेर उनको मोवाइल अफ भएको अनुसन्धानवाट देखिएको छ । प्रहरीले उनी कहाँ हराए भनेर खोजी गरिरहेको छ तर केही पनि तथ्य र प्रमाण फेला परेका छैनन् ।”
“एक छोरा र एक छोरीका अभिभावकहरु अहिले आफ्नो नौजवान छोरा हराउँदा उनीहरुका ७ वर्ष निकै पी डा दायी भएका छन् । मेरो पी डा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ अरु कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन, आमाले भनिन्, हामीले चिन्ता गर्दा पनि काउन्सिल गर्ने छोराले यस्तो कदम उठाउला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौं ।”